Hauna kumbogadzirira seMutarisiri
Zvakaoma sei kutarisira vanorohwa nesitiroko? Uyezve, wakambozviona iwe uri pabasa remuchengeti wevarwere ve stroke? Pane nzira here yekubatsira iye akabatwa nesitiroko uchichengetedza hutano hwako uye hutano hwako? Pazasi pane rumwe ruzivo runobatsira uye matipi ekuchengeta munhu ane sitiroko uye newewo.
Iko hakuna chaiko nzira yekugadzirira kuve muchengeti weanorwara nesitiroko. Muzviitiko zvese, iwe unokandwa kamwe kamwe mune ino isingatarisirwe mamiriro uye iwe hauzive chaizvo zvekuita zvinotevera. Izvi zvinotonyanya kukudzwa panguva yekugadzirisa.
Wana Kuzvimiririra Mushure mekurohwa, Usanonoka
Kupa murwere rusununguko rwavo sekugona kwazvinogona kuitwa, ndicho chimwe chezvinhu zvakanakisa zvaungaite semuchengeti. Ita kuti imba igadziriswe zvakanyanya sezvinobvira kune anorwara nesitiroko. Nekuita izvi vanowana rusununguko uye chiremerera.
Simba recliner sachigaro muenzaniso wakanaka wekuti kuzvimiririra kunogona kuve chii. Kana ivo vachigona kutsikirira chigaro chavo mukunyaradzwa, munhu akabatwa azviitira chimwe chinhu chakanaka. Kana akabatwa ari mu wiricheya, unogona kuita kuti zvinhu zviwedzere kufambidzana nekuzviisa munzvimbo yavo.
Unogona kuve nyore ramp kushandisa kuenda kunze. Kuwedzera cheni inosvikika kuchinjiso chemwenje kunotendera munhu akabatidzwa kuvhenekera mwenje uye kudzima. Kuve nemidziyo yekicheni mudhirowa yakaderera kuchaita kuti zvishandiswe kune akabatwa, uye vanogona kudzidzira kushandisa ivo kakawanda.
Kugara Wakanaka mushure mekurohwa
Kana iwe ukatora nguva yekuita zvimwe zvinhu zvakapusa sekuisa inochinjika tireyi padyo nemubhedha wavo uye kushandisa bhenji mushawa zvinogona kureva mutsauko wese kurusununguko. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchita Ichokwadi chakaoma kutarisana nacho, asi kana ukatarisana nacho uchinyemwerera uye nemaonero akanaka, wauri kuita achaita zvakafanana.
Kuti uve muchengeti akanaka iwe uchafanirwa kuzvitarisira iwe zvakare. Iwe haugone kushanda kunze kwekunge iwe wakazorora zvakanaka uye uine hutano. Izvo zvakakosha kuti utore nguva yakati wandei uri wega, idya chikafu chenguva dzose uye uwane kuzorora kwakawanda sezvaunogona.
Usakanganwa pfungwa yako yekuseka. Izvo zvinokutora iwe kuburikidza neyakaomesesa nguva. Tarisa divi rinosekesa chero mamiriro ezvinhu uye iwe unozopfuura nechero chinhu chinokandwa neupenyu kwauri.